बाथरुम–ट्वाइलेट सफा राख्न के गर्ने ? – ताजा समाचार
बाथरुम–ट्वाइलेट सफा राख्न के गर्ने ?
बाथरुम तथा ट्वाइलेट व्यक्तिले नियमित समय बिताउने स्थान हुन् । घरको बैठक कोठा भन्दा बढी कतिपयले बाथरुम या ट्वाइलेटमा बिताउने गरेका छन् ।
कतिले ट्वाइलेटमा बसेर पत्रपत्रिका पढ्ने वा मोबाइलमा आफूलाई मन परेका सामग्रीहरु हेर्ने गर्छन्। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तथा योजनाहरु पनि बाथरुम या ट्वाइलेटमा बसेका बेला दिमागमा खेल्ने गरेको विभिन्न व्यक्तिले अन्तर्वार्ताहरुमा भन्ने गरेका छन् ।
त्यसका लागि आफूले प्रयोग गर्ने बाथरुम तथा ट्वाइलेट सफा हुनु पर्छ । तर बाथरुम तथा ट्वाइलेट सफा राख्नु धेरैका लागि चुनौतिको कुरा बनेको छ ।
कतिलाई लाग्न पनि सक्छ कि बाथरुम–ट्वाइलेट सफा राख्न ठूलै मेहनत गर्नु पर्छ । तर त्यसो होइन। थोरै मात्रै समय छुट्याउन सके आफ्नो बाथरुम तथा ट्वाइलेट सफा राख्न सकिन्छ ।
बाथरुम तथा ट्वाइलेट सफा राख्नका लागि,
हरेक पटक नुहाइसकेपछि बाथरुमको भित्ता तथा ढोकामा लुगाले पुच्छ्नु पर्छ । यसले गर्दा त्यहाँ लागेको बाफ तथा पानी जान्छ र सफा भइरहन्छ । यस्तै बाथटप पनि त्यसै गरी सफा गर्नु पर्छ ।
कम्तिमा हप्ताको एक पटक फ्लोर क्लिनर तथा ट्वाइलेट क्लिनरको प्रयोग गरेर बाथरुम तथा ट्वाइलेटको भूईँ तथा बेसिनहरु ब्रस लगाएर सफा गर्नु पर्छ ।
बाथरुममा प्रयोग हुने टावल, म्याट हप्ता–हप्तामा सफा गर्नु पर्छ । बाथरुम तथा ट्वाइलेटको कुनाकाप्चा पनि हप्तादिनमा सफा गर्नु पर्छ ।
बेसिन दैनिक सफा गर्न नभ्याएमा हप्तामा एक पटक राम्रोसँग ब्रस लगाएर सफा गर्नु पर्छ । सफा गर्न प्रयोग गरेको ब्रसलाई ओभानो हुने गरी राख्नु पर्छ । यस्तो ब्रस दुई हप्तामा परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
हप्तामा एकपटक ट्वाइलेटको कमोडको भित्रिभाग क्लिनरले सफा गर्नु पर्छ । प्रयोग गरिएको ब्रस राम्रोसँग पखाल्नु पर्छ । कमोडको बाहिरी भाग पनि राम्रोसँग सफा गर्नु पर्छ ।
बाथरुम तथा ट्वाइलेटमा प्रयोग भएका पर्दाहरु महिनाको एक पटक धुनु पर्छ । यसो गर्नाले बाथरुम–ट्वाइलेट सफा रहन्छ ।
ट्वाइलेट तथा बाथरूम सफा गर्ने तरिका
मानिसले घर तथा कोठा सजाउन जति समय दिन्छ, त्यति समय ट्वाइलेट तथा बाथरूमको सफाईमा दिने गरेको पाइदैन् । अधिकांश मानिस कोठाहरू सजाउने चिटिक्क पार्ने त गर्छन् । तर, ट्वाइलेटको सफाइमा भने त्यति ध्यान दिँदैनन् । यदि समयमै सहि तरीकाले ट्वाइलेट सफा भएन भने त्यसको असरले मानिस गम्भीर रोगको शिकार बन्न सक्छ ।
ट्वाइलेट तथा बाथरूम सफा नहुँदा डायरिया, हैजा, टाइफाइड, स्किन इन्फेक्शन, युरिन इन्फेक्शनलगायत विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । यस्तो रोगले बालबालिकालाई छिट्टै आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । त्यसैले, ट्वाइलेटको उचित सफाइ गर्नुका साथै त्यसलाई कीटाणुमुक्त समेत बनाउनुपर्छ । एट्याच्ड बाथरूमको अवधारणासँगै बाथरूम तथा ट्वाइलेट एउटै ठाउँमा रहने गरेको पाइन्छ । ट्वाइलेट तथा प्यान दैनिकरूपमा सफा गरे समस्या देखिने गरे को छ । त्यसैले यहाँ ट्वाइलेट–बाथरूमको सफाइ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे यहाँ वर्णन गरिएको छ ।
बाथरूम सफा गर्दा धारा पनि सफा गर्नुपर्छ । सधैं सफा तथा चम्किलो देखिने धाराले बाथरूमको सुन्दरता बढाउँछ । धारा सफा गर्न भेनेगर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सफाइका लागि प्लाष्टिकको ट्वाइलेट ब्रश लिनु उपयुक्त हुन्छ । मेटलको ब्रशले ट्वाइलेट प्यान अथवा कमोड कोरिन सक्छ । बाथरूमको टाइल, प्यान तथा कमोड सफा गरिसकेपछि ब्रशलाई राम्रोसँग पखालेर राख्नुपर्छ ।
नुहाउँदा तातोपानीको बाफ, हेयर जेल, सेभिङ क्रिम, टुथपेष्ट आदिले बाथरूममा प्रयोग भएको ऐना फोहोर तथा मधुरो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ऐनालाई भिजेको नरम कपडाले पुछेर पत्रिकाले सफा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अल्कोहलमा मखमलको कपडा भिजाएर पनि ऐना सफा गर्न सकिन्छ ।
ब्रास फिक्सर बाथरूममा सुन्दर त देखिन्छ । तर, सधैं पोलिस गर्न सकिँदैन । त्यसैले, सफा गरिसकेपछि सुक्खा हुने गरी यसलाई पुछ्नुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ नुहाउँदा पानी पास हुने ठाउँमा रौं जम्मा हुन्छन् र पानीको निकास रोकिन्छ । यसका लागि समय–समयमा पानी पास हुने ठाउँ पनि सफा गर्नुपर्छ । पानी पास हुने ठाउँ थुनिएको अवस्थामा बेकिङ सोडाको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तातोपानीसँग बेकिङ सोडा प्रयोग गर्दा राम्रोसँग पानी पास हुन्छ र त्यसबाट राम्रो बास्ना समेत आउँछ ।
बाथरूम सफा गर्दा सावर हेड सफा गर्न बिर्सनु हुँदैन । कडा पानी त्यसमा पनि लाइम र मिनरल भएको पानीले सावर हेडको प्वाल बन्द गर्ने हुँदा त्यसमा प्रेसर कम भएर पानी कम आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा भिनेगारलाई तातो बनाई त्यसमा सावर हेडलाई करीब १ घण्टा डुबाउनुपर्छ । त्यसपछि टुथब्रसको सहयोगले प्वाल सफा गरेर पानीले धुन सकिन्छ ।
टाइल, सिङ र ट्युब
टायल, ट्युब तथा सिङमा पनि कहिलेकाहीँ खिया लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा खिया लागेको ठाउँमा कागतीको रस ३० मिनेट राखेर सफा गर्न सकिन्छ ।
नुहाउँदा वा हातगोडा सफा गर्दा साबुन तथा सावर जेल ट्वाइलेटको चारैतिर फैलिन्छ । टायल, धारा, साबुन राख्ने बट्टा, बाथरूमको ढोका आदि त्यसै पनि फोहोर देखिन्छ । यसको सफाइका लागि नुहाएपछि सबै ठाउँ पानीले पखालेर सुक्खा कपडाले पुछनुपर्छ ।
-हप्तामा एकपटक ट्वाइलेट सिटको भित्र–बाहिर राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ ।
-ट्वाइलेटलाई स्वच्छ तथा गन्धरहित बनाउन ट्याङ्कमा ट्वाइलेट बाउल टेबलेट्स राख्नुपर्छ ।
-ट्वाइलेट सिटमा ब्याक्टेरिया लेउका रूपमा बस्छ । त्यसैले, ट्वाइलेटको सफाइका लागि गुणस्तरीय क्लिनरको प्रयोग गर्नुपर्छ । ट्वाइलेट सिटको भित्र–बाहिर ट्वाइलेट क्लिनर राम्रोसँग लगाएर करीब आधा घण्टा छोडिदिनुपर्छ ।
-ट्वाइलेट सफा तथा फ्रेश राख्न कडा दाग हटाउनुका साथै गन्ध हटाएर फ्रेसनेश महसूस गराउने क्लिनरको प्रयोग गर्नुपर्छ । एसिड तथा फिनेलजस्ता पुराना प्रविधि छोडेर आधुनिक तरीकाले बनाइएको ट्वाइलेट क्लिनर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
– लगाउने चप्पल ट्वाइलेटभित्रै राख्नुपर्छ । यसो गर्दा कीटाणु घरको अरू ठाउँमा पुग्न सक्दैन ।
– बालबालिकालाई ट्वाइलेट प्रयोग गर्ने तरीका सिकाउनुपर्छ ।
बाथरुमले देखाउछ हैसियत, कतिसम्म खर्च गर्ने !
भनिन्छ, बाथरुमले घरधनिको हैसियत देखाउँछ । त्यसैले उच्च खानदानका मानिसहरु आफ्नो बाथरुममा थुपै सामानहरु राख्न रुचाउँछन् । उक्त सामानहरुले बाथरुमलाई आकर्षक बनाउनुको साथै ति सामानहरुको प्रयोग गर्नपनि सकिन्छ । घरमा आउने पाहुनाहरुले घरको अन्य कोठाहरुको भ्रमण गर्न नपाएतापनि बाथरुम चाँहि अवश्य प्रयोग गर्छन् । हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिएका सामानहरुको मूल्य तपाइले सोचेजस्तो महंगो छैन तर बजारमा यसका बिभिन्न भेराइटीहरु आएको हुँदा मूल्यमा फरक पर्छ ।
हेरौ, बाथरुममा प्रयोग गरिने केही महत्वपूर्ण सामानहरु ।
यसको नेपाली बजार मूल्य रु १५ देखि ७० रुपैयाँ सम्म पर्छ ।
तपाइले बाथरुममा स्टाइल स्टेशन छ भने तपाईले नुहाउने बित्तिकै चिसो कपाल लिएर हिड्नु पर्दैन साथै यसमा कपालको सजावटको सामानहरु राख्न सकिन्छ । बाथरुममा तौलिया झुन्ड्याएझै यसलाई सहज रुपमा झुन्ड्याउन सकिन्छ । यसको बजार मूल्य लगभग ४ सय ५० पर्छ ।
तौलिया बाथरुममा नभइ नहुने वस्तु हो । पानीको प्रयोग गरिसकेपछि यसको आवश्यकता पर्छ । सामान्यतय रु ३ सय भन्दा माथिको मूल्यमा तौलिया खरिद गर्न सकिन्छ ।
फोहोर फाल्ने भाँडो
उक्त भाँडोमा तपाइले प्रयोग गरिसक्नुभएको वस्तुहरु जसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिदैन फल्न सकिन्छ । यसको बजार मूल्य करिव ३ सय रुपैयाँ पर्छ ।
बाथम्याट डोरम्याट जस्तै वस्तु हो । जुन बाथरुममा टेक्न प्रयोग गरिन्छ । यसको बजार मूल्य करिब ६ सय रुपैयाँ पर्छ ।
जसको बाथरुममा घर्राहरु छैन त्यस्तो खालको बाथरुममा सावर क्याडी प्रयोग गर्न सकिन्छ । सावर क्याडी एउटा सामान राख्ने भाँडो हो यसमा सवारको बेला प्रयो गरिने सामानहरु राख्न सकिन्छ ।
बाथरुममा प्रयोग भएका फोहोर कपडाहरुलाई राख्नको लागि प्रयोग गरिने ह्याम्परको बजार मूल्य १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।
पाहुनाको लागि साबुन
बाथरुमको प्रयोग पाहुनाहरुलेपनि गर्ने हुनाले पाहुनाहरुको लागि छुट्टै साबुन राख्न सकिन्छ । यस्तो खालको साबुन एकजनाको लागि वा धेरै जनाले प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो सावुनको मूल्य २० रुपैया वा सो भन्दा बढी पर्छ ।
मेकअपका सामग्रीहरु राख्ने भाँडो
महिलाहरुको मेकअपका सामानहरु राख्ने भाँडा हो यो । यसमा लिपस्टिक, आइलाइनर्स जस्ता सामाग्रीहरु राख्न सकिन्छ ।
जिउ माड्ने जालो
सावरको समयमा प्रयोग गर्न सकिने यो जालोको बजार मूल्य करिव ५० रुपैयाँ पर्छ ।
ट्वाइलेट ब्रस तथा होल्डर
ब्रस ट्वाइलेट सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ भने ब्रस होल्डर ब्रसलाई छोपेर राख्न प्रयोग गरिन्छ । आकर्षक बाथरुममा ब्रस त्यसै राख्दा बाथरुमको सुन्दरता घट्छ । यसको बजार मूल्य करिब ६ सय रुपैयाँ पर्छ ।
यसको प्रयोग बच्चाहरुलाई नुहाउने क्रममा हुन्छ । आफ्नो जिउको सपोर्टको लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै वासिङ मेसिनको काम गर्दा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको बजार मूल्य करिव ५ सय रुपैयाा पर्छ ।
बाथरुमलाई थप आकर्षक बनाउनको लागि रंगिन पर्दाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाथरुम र ट्वाइलेटको भाग छुट्याउनको लागि प्रयोग गरिने यो पर्दाको मूल्य करिव १ हजारमा पाइन्छ । साथै कलात्मक चित्रहरु भएको पर्दा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
बाथरुममा प्रयोग गरिने ऐना गुणस्तरिय हुनुपर्छ । जसले महिला तथा पुरुषहरुले बाथरुममा प्रयोग गर्ने मेकअपहरुको सहि प्रयोग गर्न सक्छन् । राम्रो ऐनाको मूल्य करिब १ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
बाथरुममा मोबाइल कभर ! हो आफ्नो मोबाइललाई पानीबाट बचाउनको लागि यो आवश्यक छ । बजारमा बिभिन्न खालको बाथरुममा प्रयोग गरिने मोबाइल कभरहरु पाइन्छ सामान्यतया ५ सय रुपैयाँमा आकर्षक मोबाइल खरिद गर्न सकिन्छ ।
नालिमा प्रयोग गरिने प्लग
यस्तो प्लगले झरेका कपालहरुलाई संकलन गर्छ । बाथरुमको आउटलेटमा यो प्लग सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । समय समयमा उक्त प्लगमा जम्मा भएका कपालहरु फाल्नु आवश्यक छ ।
हामीले प्रयोग गर्दै आएको भन्दा भिन्न खालको ब्रस होल्डर पनि बजारमा आएका छन् बाथरुमको कुनै भागमा राख्न मिल्ने उक्त ब्रस होल्डरमा ब्रसहरुलाई सजिलै राख्न सकिन्छ ।
नेलकटरपनि बाथरुमको लागि नभइनहुने वस्तु हो ।